2 Ihe E Mere 36 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
2 Ihe E Mere 36:1-23
36 Ndị ala ahụ wee kpọrọ Jehoahaz+ nwa Josaya mee ya eze na Jeruselem n’ọnọdụ nna ya.+
2 Jehoahaz gbara afọ iri abụọ na atọ mgbe ọ malitere ịchị, ọ chịkwara ọnwa atọ na Jeruselem.+
3 Otú ọ dị, eze Ijipt wepụrụ ya n’ọchịchị na Jeruselem+ ma rie ala ahụ iwu otu narị talent ọlaọcha+ na otu talent ọlaedo.
4 Eze+ Ijipt mekwara Elayakim+ nwanne ya nwoke eze Juda na Jeruselem ma gbanwee aha ya ka ọ bụrụ Jehoyakim. Ma Niko+ kpọọrọ Jehoahaz nwanne ya nwoke kpọta Ijipt.+
5 Jehoyakim+ gbara afọ iri abụọ na ise mgbe ọ malitere ịchị, ọ chịkwara afọ iri na otu na Jeruselem.+ O wee na-eme ihe jọrọ njọ n’anya Jehova bụ́ Chineke ya.+
6 Nebukadneza+ eze Babịlọn wee wakpo ya,+ ka o wee tụọ ya ịgà abụọ e ji ọla kọpa mee iji kpụrụ ya laa Babịlọn.+
7 Nebukadneza+ bukwaara ụfọdụ n’ime arịa+ ndị dị n’ụlọ Jehova bute Babịlọn ma debe ha n’obí ya dị na Babịlọn.+
8 Ma ihe ndị ọzọ metụtara+ Jehoyakim na ihe arụ+ ndị o mere na ihe ọjọọ a chọpụtara banyere ya, lee, e dere ha n’Akwụkwọ+ Ndị Eze Izrel na Juda; Jehoyakin+ nwa ya wee malite ịchị n’ọnọdụ ya.
9 Jehoyakin+ gbara afọ iri na asatọ mgbe ọ malitere ịchị, ọ chịkwara ọnwa atọ+ na ụbọchị iri na Jeruselem. O wee na-eme ihe jọrọ njọ n’anya Jehova.+
10 O wee ruo ná mmalite+ afọ na Eze Nebukadneza zipụrụ+ ndị ikom ya ka ha kpụta ya Babịlọn+ ma bute arịa ndị mara mma dị n’ụlọ Jehova.+ O mekwara Zedekaya+ nwanne nna ya eze Juda nakwa Jeruselem.+
11 Zedekaya+ gbara afọ iri abụọ na otu mgbe ọ malitere ịchị, ọ chịkwara afọ iri na otu na Jeruselem.+
12 O wee na-eme ihe jọrọ njọ+ n’anya Jehova bụ́ Chineke ya. O wedaghị onwe ya ala+ n’ihu Jeremaya+ onye amụma,+ bụ́ onye kwuru okwu dị ka Jehova nyere n’iwu.
13 O nupụkwaara ọbụna Eze Nebukadneza isi,+ bụ́ onye mere ka o jiri Chineke ṅụọ iyi;+ o wee kwesie olu ike,+ kpọchiekwa+ obi ya wee ghara ịlọghachikwute Jehova bụ́ Chineke Izrel.
14 Ọbụna ndị isi nchụàjà+ niile na mmadụ niile mere omume ekwesịghị ntụkwasị obi nke ukwuu, dị ka ihe arụ+ niile nke mba ndị ọzọ si dị, ha wee merụọ ụlọ Jehova, nke o doro nsọ na Jeruselem.+
15 Jehova bụ́ Chineke ndị nna nna ha wee na-ezigara ha ndị ozi ya+ ka ha dọọ ha aka ná ntị, o zigara ha ugboro ugboro, n’ihi na o nweere ndị ya ọmịiko,+ nweekwa ọmịiko maka ebe obibi ya.+
16 Ma ha ji ndị ozi nke ezi Chineke na-eme ihe ọchị,+ na-eledakwa okwu ya anya+ ma na-akwa+ ndị amụma ya emo, ruo mgbe ọnụma+ Jehova bịakwasịrị ndị ya, ruo mgbe ọ na-enweghị ihe ga-egbochi ya.+
17 O wee mee ka eze ndị Kaldia buso ha agha,+ eze ahụ wee jiri mma agha gbuo ụmụ okorobịa ha+ n’ime ụlọ nsọ ha,+ o nweghịkwara nwa okorobịa ma ọ bụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, okenye ma ọ bụ agadi ume na-adịkwaghị ọmịiko.+ O nyefere ihe niile n’aka ya.
18 Arịa niile+ dị n’ụlọ ezi Chineke, ma ndị ukwu+ ma ndị nta, na akụ̀+ ndị dị n’ụlọ Jehova na akụ̀ eze+ na nke ndị o mere ndị isi, o buuru ha niile laa Babịlọn.
19 O wee gbaa ụlọ ezi Chineke ọkụ+ ma kwatuo mgbidi+ Jeruselem; ha gbakwara ụlọ elu ya niile ọkụ, gbaakwa arịa ya niile dị oké ọnụ ahịa ọkụ,+ iji bibie ihe niile.+
20 Ọ kpụkwaara ndị mma agha gbufọrọ laa Babịlọn.+ Ha wee bụrụ ndị na-ejere ya na ụmụ ya ozi+ ruo mgbe alaeze Peshia+ malitere ịchị;
21 iji mezuo ihe Jehova kwuru site n’ọnụ Jeremaya,+ ruo mgbe ala ahụ debezuru ụbọchị izu ike o ji ụgwọ ya.+ O debere ụbọchị izu ike n’ụbọchị niile ọ tọgbọrọ n’efu ruo mgbe afọ iri asaa zuru.+
22 N’afọ mbụ nke ọchịchị Saịrọs+ eze Peshia,+ ka ihe Jehova kwuru+ site n’ọnụ Jeremaya+ wee mezuo, Jehova kpaliri mmụọ+ Saịrọs eze Peshia. O wee mee ka a kpọsaa n’alaeze ya dum, deekwa ya n’akwụkwọ,+ sị:
23 “Nke a bụ ihe Saịrọs eze Peshia+ kwuru, ‘Jehova bụ́ Chineke nke eluigwe enyewo m+ alaeze niile nke ụwa. Ya onwe ya enyewokwa m ọrụ iwuru ya ụlọ na Jeruselem, nke dị na Juda.+ Onye ọ bụla n’ime unu, n’etiti ndị ya niile,+ ka Jehova bụ́ Chineke ya nọnyere ya.+ Ya lawa.’”+
2 Ihe E Mere 36
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D14%26Chapter%3D36%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl